Nidaamka Heerka Tilmaanta Tuscan
Nidaamka tiirarka taayirku wuxuu ka dhigaa rakibida mid dhakhso leh oo isku mid ah. Waxay ka samaysan yihiin qalab adag oo caag ah oo adag oo ku filan inay xajistaan ​​culeyska taashka. Dayactirkiisa iyo cidhibtiisa nadiifka ah awgood, waxaad ku heli doontaa dhammeystirka ugu fiican ee suurogal ah dhammaan shaqooyinka dabaqaaga ah. 1.Waxaan haysannaa nambar moodel oo kala duwan oo ku habboon baahida macaamiisha kaladuwan. 2. Fasaxyada looxa ah waxay ka samaysan yihiin 100% shey cusub. Ujeedadeedu waa hufnaan wanaagsan, aan sun lahayn, aan dhadhan lahayn oo waarta. Fasaxyada Qalabka Dabaqa ah ee 3Plastic 1F ilaa 10mm